Sajhasabal.com |गजल - कस्ती भए हुन्छ ?
गजल - कस्ती भए हुन्छ ?
चाहिन्न बरू गाेरी, हल्का काली भए हुन्छ ।
मलाई माया गर्ने, दिल वाली भए हुन्छ ।
सम्झाैता र सहकार्यमा चल्नेछ जीवन
हृदयमा मायालु सिट खाली भए हुन्छ ।
अाउँदा उनी धन सम्पति पर्दैन केहि
अक्षता र फुलपातीकाे थाली भए पुग्छ ।
सन्तति जाेगाउनलाई राख्नुपर्छ बीउ
उर्वर भुमीमा एकदुई बाली भए हुन्छ
कहिलेकाहीँ संयाेगले ससुराली पुग्दा
भिनाजु के छ भन्दै साेध्ने साली भए हुन्छ ।
पढेर बुझ्नुभयाे हाेला , भन्न खाेज्या केहाे
गजल लेखे मनपरे ताली भए हुन्छ ।
- प्रज्वल पाैडेल, "पिस्क्वाएर", रामेछाप